मैले पृथ्वीमा धेरैलाई आफ्नो अनुयायी हुन खोजेको छु। ती सबै अनुयायीमध्ये पूजाहारीका रूपमा सेवा गर्ने, अगुवाई गर्ने, परमेश्‍वरका पुत्रहरू, परमेश्‍वरका जनहरू र सेवा गर्नेहरू छन्। उनीहरूले मप्रति देखाउने वफादारीका आधारमा म उनीहरूको वर्गीकरण गर्छु। जब प्रकारअनुसार सबै वर्गीकृत हुन्छन्, भन्नुको तात्पर्य, जब हरेक प्रकारका व्यक्तिको स्वभाव प्रस्ट हुन्छ, तब मानवजातिको मुक्तिको मेरो लक्ष्य प्राप्त गर्न म उनीहरू प्रत्येकलाई न्यायसङ्गत वर्गमा गणना गर्नेछु र प्रकार सुहाउँदो स्थानमा राख्नेछु। मैले मुक्त गर्न चाहेकाहरूलाई म मेरो घरमा समूह-समूहमा बोलाउँछु र त्यसपछि सबैलाई आखिरी दिनहरूका मेरा काम स्वीकार गर्न लगाउँछु। त्यति नै बेला, उनीहरूको प्रकारअनुसार म वर्गीकरण गर्छु, त्यसपछि प्रत्येकलाई उनीहरूका कार्यहरूको आधारमा पुरस्कृत वा दण्डित गर्छु। मेरो कामका चरणहरू यस्ता छन्।
आज म पृथ्वीमा बस्छु र मानिसको बीच बस्छु। मानिसहरूले मेरो कामको अनुभव गर्छन् र मेरा वाणीहरूको प्रतीक्षा गर्छन् र यसका साथै मेरो प्रत्येक अनुयायीलाई म सबै सत्यता प्रदान गर्दछु कि उनीहरूले मबाट जीवन प्राप्त गर्न सक्छन्, र त्यसैले आफू हिँड्ने बाटो पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। किनकि म परमेश्‍वर हुँ, जीवनदाता हुँ। मेरा कामका धेरै वर्षका दौडान मानिसहरूले धेरै कुरा प्राप्त गरेका छन् र धेरै कुरा गुमाएका छन्, तर अझ पनि म भन्छु उनीहरू मलाई साँच्चिकै विश्‍वास गर्दैनन्। किनकी मानिसहरू मुखले मात्र मलाई परमेश्‍वर भनी स्वीकार गर्छन् तर, मैले भनेका सत्यताहरूसँग विमति राख्छन्, र अझ मैले उनीहरूलाई भनेका सत्यता अभ्यास गर्दैनन्। भन्नुपर्दा, मानिसहरू परमेश्‍वरको अस्तित्वलाई मात्र स्वीकार गर्छन् तर सत्यताको अस्तित्वलाई होइन; मानिसहरू परमेश्‍वरको अस्तित्वलाई मात्र स्वीकार गर्छन् तर जीवनको अस्तित्वलाई होइन। मानिसहरू परमेश्‍वरको नामलाई मात्र स्वीकार गर्छन् तर उहाँको सारलाई होइन। उनीहरूको उत्साहको लागि म उनीहरूलाई घृणा गर्छु किनकी मलाई झुक्याउन उनीहरू मीठो बोलीहरू मात्र प्रयोग गर्छन्; कसैले पनि मलाई साँच्चिकै आराधना गर्दैन। तिमीहरूका भनाइहरूमा सर्पको प्रलोभन छ; अझ बढी, तिनमा चरम घमण्ड, प्रधान दूतको वास्तविक अभिव्यक्ति झल्किन्छ; तिमीहरूका काम कलङ्कित हुने गरी लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन्; तिमीहरूका अधिक चाहनाहरू र लोभी अभिप्रायहरू सुन्न लाजमर्दो छन्। तिमीहरू सबै मेरो घरमा कीरा बनेका छौ, घृणाको साथ खारेज गर्ने वस्तु बनेका छौ। तिमीहरू कोही पनि सत्यलाई मन पराउँदैनौ; सट्टामा, आशीर्वाद पाउन लालायित हुन्छौ, स्वर्ग चढ्ने इच्छा राख्छौ, ख्रीष्टले उहाँको शक्ति पृथ्वीमा प्रयोग गरेको भव्य दृश्य हेर्ने चाहना राख्छौ। तर परमेश्‍वर के हुनुहुन्छ भन्ने थाहा नभएका तिमीहरूजस्ता अति भ्रष्ट व्यक्ति कसरी परमेश्‍वरका अनुयायी हुन लायक हुन्छ भनेर के तिमीहरूले कहिल्यै सोचेका छौ? कसरी तिमीहरू स्वर्गमा चढ्न सक्छौ? कसरी तिमीहरू यस्तो भव्य दृश्य, जुन दृश्यको भव्यताको कुनै पूर्ववर्ती कुरा छैन, त्यो हेर्न लायक हुन्छौ? तिमीहरूका मुख छलकपट, दुर्वचन, विश्‍वासघात र अहङ्कारका शब्दहरूले भरिएको छ। तिमीहरूले मसँग कहिल्यै पनि सत्यताका शब्दहरू बोलेका छैनौ, मेरो शब्द अनुभव गरेर कुनै पवित्र शब्द, कुनै विनम्रताका शब्द बोलेका छैनौ। अन्त्यमा, तिमीहरूको विश्‍वास कस्तो छ? तिमीहरूका हृदयमा आकाङ्क्षा र पैसाबाहेक केही पनि छैन र न तिमीहरूका चित्तमा भौतिक वस्तुबाहेक केही छ। प्रत्येक दिन मबाट कसरी केही कुरा लिने भनेर तिमी हिसाबकिताब गर्छौ। मबाट कति सम्पत्ति र कति भौतिक वस्तु प्राप्त गऱ्यौ, तिमी हरेक दिन लेखाजोखा गर्छौ। हरेक दिन तिमी अझ बढी कृपा प्राप्त होस् भनेर पर्खन्छौ, ताकि ती वस्तुबाट तिमीले अधिक मात्रामा र उच्च तहको आनन्द लिन सकोस्। तिमीहरूको प्रत्येक पलको सोचाइमा म हुन्न, न त त्यहाँ मबाट आउने सत्यता नै हुन्छ, तर बरु त्यहाँ त तिमीहरूका श्रीमान वा श्रीमती, छोराहरू, छोरीहरू र तिमीहरूले खाने र लगाउने कुराहरू हुन्छन्। तिमीहरू कसरी अझ बृहत्, अझ अधिक आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसैमा दत्तचित्त हुन्छौ। तर तिमीहरूले पेट फुट्ने गरी खाए पनि के तिमीहरू अझै लास होइनौ? तिमीहरूले आफूलाई बाहिरी रूपमा यति सुन्दर वस्त्रले सिङ्गारपटार गरे पनि के तिमीहरू अझ पनि जीवनविहीन जिउँदो लास होइनौ? आफ्नो पेटको लागि तिमीहरू कपाल फुलेर सेतो नहुँदासम्म परिश्रम गर्छौ तर पनि मेरो कामका लागि तिमीहरू कसैले पनि एक त्यान्द्रो कपालसम्म त्याग गर्दैनौ। तिमीहरू आफ्नै देहको लागि, आफ्ना छोरा-छोरीहरूका लागि आफ्नो शरीरलाई बोझ बोकाएर र मस्तिष्कलाई यातना दिएर निरन्तर हिँडिरहेका छौ, तर पनि मेरो इच्छाको लागि एक जनाले पनि कुनै सरोकार वा चासो राख्दैनौ। तिमीहरूले मबाट अझ पनि प्राप्त गर्न चाहेको त्यस्तो कुरा के हो?
म काम गर्दा, कहिल्यै हतारमा गर्दिनँ। मानिसहरूले मलाई जसरी अनुसरण गरे पनि म मेरो काम चरणबद्ध रूपमा र मेरो योजनाअनुसार गर्छु। तसर्थ, मेरो विरुद्ध तिमीहरूका सबै विद्रोहका बाबजुद म अझ निरन्तर रूपमा काम गर्छु र अझ मैले बोल्नैपर्ने शब्दहरू बोल्न कहिल्यै छाड्दिनँ। म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मेरो घरमा निम्त्याउँछु, जो मेरो सन्देश सुन्न मद्वारा पहिले नै निश्चित गरिएका थिए। मेरा वचनहरू मान्ने, मेरा वचनहरू सुन्न लालायित हुने सबैलाई म मेरो गद्दीसामुन्ने उपस्थित गराउँछु; मेरा वचनहरूलाई बेवास्ता गर्ने, मलाई नटेर्ने र खुलमखुला चुनौती दिने सबैलाई अन्तिम दण्डको लागि तयार रहन एकातिर फालिदिन्छु। सबै मानिस भ्रष्टतासँगै र दुष्टको छत्रछायामा बस्ने भएकाले, मेरा अनुयायीमध्ये थोरै मात्र सत्यताको लागि मरिमेट्छन्। यसो भन्नुपर्छ, अधिकांश मानिस मलाई पूर्ण भक्तिभावले उपासना गर्दैनन्, उनीहरू सत्यतामा मेरो उपासना गर्दैनन् तर भ्रष्टता र विद्रोहजस्ता कपटपूर्ण माध्यमहरूबाट मेरो विश्‍वास जित्ने प्रयास गर्छन्। यही कारणले म भन्छु: धेरैलाई बोलाइन्छ तर थोरैलाई चुनिन्छ। जसलाई बोलाइन्छ, उनीहरू भ्रष्टतामा चुर्लुम्म डुबेका छन् र सबै उही युगमा बाँचेका छन्, तर जो छानिएका छन् उनीहरू एक हिस्सा हुन्, उनीहरू सत्यतामा विश्‍वास गर्ने र सत्यतालाई स्वीकार गर्ने मानिसहरू हुन्, साथै उनीहरू सत्यता अभ्यास गर्छन्। तर ती मानिस सम्पूर्णताको सानो अंश मात्र हुन् र उनीहरूबाटै मैले बढी गौरव प्राप्त गर्नेछु। यी वचनका आधारमा, के तिमीहरू छानिएकाहरूमा पऱ्यौ भनी तिमीहरूले थाहा पायौ? तिमीहरूको अन्त्य कस्तो हुने रहेछ?
मैले भनेझैं, मेरो अनुसरण गर्ने धेरै छन् तर मलाई साँच्चिकै निस्वार्थ प्रेम गर्ने थोरै छन्। सायद कोहीले सोध्न सक्छन्, “मैले हजुरलाई प्रेम गरिनँ भने, मैले त्यति धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ र? मैले हजुरलाई प्रेम गरिनँ भने यो हदसम्म मैले पालन गर्नुपर्छ र?” अवश्य नै, तँसँग असङ्ख्य कारण छन् र निश्चय नै, तेरो प्रेम धेरै महान् छ, तर मेरो लागि तेरो प्रेमको के अर्थ? “प्रेम” को परिभाषाअनुसार यो यस्तो भावना हो, जुन शुद्ध र दोषरहित हुन्छ जहाँ तँ प्रेम गर्न, अनुभव गर्न र विचारमग्न हुन आफ्नो हृदय प्रयोग गर्छस्। प्रेममा कुनै सर्त हुँदैन, कुनै अवरोध हुँदैन र कुनै दूरी पनि हुँदैन। प्रेममा कुनै शङ्का हुँदैन, कुनै छलकपट हुँदैन र कुनै धूर्तता पनि हुँदैन। प्रेममा कुनै लेनदेन हुँदैन र केही कुरा पनि अपवित्र हुँदैन। यदि तैँले प्रेम गर्छस् भने, छलकपट गर्दैनस्, गुनासो गर्दैनस्, धोका दिँदैनस्, विद्रोह गर्दैनस्, धुत्ने वा कुनै कुरा प्राप्त गर्ने अथवा निश्चित मात्रामा केही पाउने प्रयास गर्दैनस्। यदि तैँले प्रेम गरिस् भने, खुसीसाथ आफूलाई समर्पण गर्नेछस्, खुसी र दुःख सहनेछस्, तँ मेरो अनुकूल हुनेछस्, मेरा लागि आफूसँग भएका सम्पूर्ण कुरा त्याग्नेछस्, आफ्‍नो परिवार, आफ्‍नो भविष्य, आफ्‍नो यौवन र आफ्‍नो विवाह त्याग्नेछस्। होइन भने, तेरो प्रेम कत्ति पनि प्रेम हुनेछैन, तर त्यो त केवल छलकपट र धोका हुनेछ! तेरो प्रेम कस्तो प्रेम हो? के यो साँचो प्रेम हो? अथवा झूटो? तैँले कति कुरा त्यागिस्? तैँले कति कुरा दिइस्? मैले तँबाट कति प्रेम प्राप्त गरेँ? के तँलाई थाहा छ? तिमीहरूको हृदय पाप, विश्‍वासघात र छलकपटले भरिएको छ, र त्यसकारण तिमीहरूको प्रेम कति अपवित्र छ? तिमीहरू सोच्छौ मेरो लागि प्रशस्त कुराहरू तिमीहरूले त्यागिसकेका छौ; तिमीहरू ठान्छौ मेरो लागि तिमीहरूको प्रेम चाहिनेभन्दा बढी भइसक्यो। तर किन तिमीहरूका भनाइ र गराइहरू सधैँ विद्रोही र कपटपूर्ण हुन्छन्? तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्छौ तर पनि मेरो वचन स्वीकार गर्दैनौ। के यसलाई प्रेम मान्न सकिन्छ? तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्छौ तर पनि मलाई एकातिर पन्छाइ दिन्छौ। के यसलाई प्रेम मान्न सकिन्छ? तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्छौ तर पनि मलाई सन्देह गर्छौ। के यसलाई प्रेम मान्न सकिन्छ? तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्छौ तर पनि मेरो अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्दैनौ। के यसलाई प्रेम मान्न सकिन्छ? तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्छौ तर पनि मलाई सुहाउँदो व्यवहार गर्दैनौ र हरेक पटक मेरो लागि समस्या सिर्जना गर्छौ। के यसलाई प्रेम मान्न सकिन्छ? तिमीहरू मेरो अनुसरण गर्छौ तर पनि हरेक कुरामा मलाई मूर्ख बनाउने र धोका दिने प्रयास गर्छौ। के यसलाई प्रेम मान्न सकिन्छ? तिमीहरू मेरो सेवा गर्छौ तर मसँग डर मान्दैनौ। के यसलाई प्रेम मान्न सकिन्छ? हरतरहले र सबै कुरामा तिमीहरू मेरो विरोध गर्छौ। के यी सबैलाई प्रेम मान्न सकिन्छ? यो सत्य हो कि तिमीहरू पूर्ण रूपमा समर्पित छौ तर मैले तिमीहरूबाट चाहेको कुरा तिमीहरूले कहिल्यै पनि अभ्यास गरेनौ। के यसलाई प्रेम भन्न सकिन्छ? सुविचारित लेखाजोखाले देखाउँछ कि तिमीहरूभित्र मेरो लागि प्रेमको अलिकति पनि सङ्केत छैन। यत्तिका वर्षका काम र मैले दिएका यति धेरै वचनपछि तिमीहरूले वास्तवमा कति प्राप्त गऱ्यौ? के यो पछाडि फर्किएर ध्यानपूर्वक हेर्न लायक छैन? म तिमीहरूलाई सचेत गराउँछु: जसलाई मैले बोलाउँछु उनीहरू कहिल्यै पनि भ्रष्ट नभएका व्यक्ति होइनन्: बरु, जसलाई मैले छानेँ उनीहरू मलाई साँच्चिकै प्रेम गर्छन्। त्यसैले, आफ्ना भनाइ र गराइहरूमा तिमीहरू सचेत हुनैपर्छ, साथै आफ्ना मनसाय र विचारहरूलाई तिमीहरूले जाँच्नुपर्छ ताकि तिनीहरूले सीमा उल्लङ्घन नगरून्। आखिरी दिनहरूका समयमा, तिमीहरूको प्रेम मेरो अगाडि समर्पित गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर, अन्यथा मेरो क्रोध तिमीहरूबाट टाढा जानेछैन।
अर्को: देहधारणको रहस्य (४)